ဆဒမ်း ဟူစိန်း အာ့ဘ် အယ်မဂျဒီး အက်လ် တက်ရ်တီး (အင်္ဂလိပ်: Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti)[မှတ်စု 1] 28 April 1937[မှတ်စု 2] – 30 December 2006) သည် ၁၉၇၉ ဇူလိုင် ၁၆မှ မှ ၂၀၀၃ ဧပြီ ၉ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အီရတ်နိုင်ငံ၏ ပဉ္စမမြောက် သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေး အာရပ် ဆိုရှယ်လစ်ဘားသ်ပါတီ(Arab Socialist Ba'ath Party)၏ ဦးဆောင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် (အီရတ်လူမျိုးရေးအဓိကဂိုဏ်း) ဘဂ္ဂဒက်အခြေစိုက် ဘားသ်ပါတီ နှင့် ၎င်း၏ဒေသတွင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် (အာရပ်ရောနှောမှု နှင့် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုလက်ခံအားပေးသော ဘားသ်ဝါဒ ) အီရတ်ဘားသ်ပါတီတို့၏ ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၆၈အာဏာသိမ်းယူမှု၌ ဆဒမ်သည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အီရတ်တွင် ၎င်းပါတီအာဏာရလာခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးချူချာသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အာမက် ဟတ်ဆန် အယ်ဘကာရ်(Ahmed Hassan al-Bakr) အောက်၌ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ထမ်းဆောင်သည်။ အုပ်စုအဖွဲ့အများအပြားသည် အစိုးရကို တော်လှန်နိုင်ခြေရှိနိုင်သည်ဟုယူဆ၍ အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မှားကြား ပဋိပက္ခများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထိန်းချုပ်ရန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို ထူထောင်သည်။ ရေနံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်များ ကို ၁၉၇၀၌ ဆဒမ်က ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု၊ ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ၊ အီရန်-အီရတ် စစ်ပွဲများကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစနစ်ကြီးသည် နောက်ဆုံးတွင် ကြွေးထူခဲ့ရ၏။ ရေနံမှရသောငွေကြေးသည် အီရတ်စီးပွားရေးကို လျှင်မြန်စွာဦးမော့လာစေရန် ကူညီနိုင်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၇၀နှစ်များတစ်လျှောက်တွင် ဆဒမ်သည် အစိုးရစနစ်၌ ၎င်း၏ဩဇာကို ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏ အာဏာရနေရာအများစုကို ဆွတ်နီအာရပ်များဖြင့် ဖြည့်ဆည်းသည်။ ဆွတ်နီအာရပ်များမှာ လူနည်းစုဖြစ်၍ တိုင်းပြည်လူဦးရေ ငါးပုံတစ်ပုံအရေအတွက်ရှိလေသည်။
နိုင်ငံတွင်း စာတတ်မြောက်ရေးများ၊ အခမဲ့ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်မိသားစုများကို ထောက်ပံ့သည်။ လူတိုင်းဆေးရုံတက်နိုင်ခွင့်၊ လယ်သမားများကို အမတော်ငွေချေးပေးခြင်းလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့၏။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ UNESCOမှ ဆုရရှိခဲ့သည်။ ရေနံအခြေခံ လုပ်ငန်းများချဲ့၍ နိုင်ငံစီးပွားတက်စေပြီး လမ်းဖောက်၊ သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်းစသည်တို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့၏။ လျှပ်စစ်ဓာတ်များ မြို့တိုင်းနီးပါးရစေခြင်းလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၆တွင် ဆဒမ်သည် ၎င်းတပ်မတော်၏ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးတိုးမြှင့်ရရှိခဲ့၍ လျှင်မြန်စွာပင် အာဏာရှင်ဖြစ်လာသည်။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် အယ်လ်ကဘာရ်မှာ တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ဆဒမ်သာလျှင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အစိုးရမျက်နှာစာတွင် အရေးပါသောနေရာယူခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ၏ ဗိသုကာဖြစ်လာကာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကို နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်၏။ တရားဝင်ရာထူးအာဏာရသည့်အချိန် ၁၉၇၉မတိုင်မီကပင် တကယ့်အာဏာရှင်မှာ ဆဒမ်သာဖြစ်၏။
ဆဒမ်က ဘားသ်ပါတီခေါင်းဆောင်များကို ညီလာခံခေါ်ယူသည်။ အစည်းအဝေး၌ Muhyi Abdel-Hussein ကို လျှို့ဝှက်ကြံစည်သူ (၆၈)ယောက်အမည်များကိုကြေငြာရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သစ္စာမရှိဟုခေါင်းစဉ်တပ်ကာ တစ်ဦးခြင်း အခန်းထဲကဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၂ဦးကို သေဒဏ်ပေးခဲ့လေသည်။ နောက်ပိုင်း ဘားသ်ပါတီထိပ်တန်း အခြားအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း သေဒဏ်ပေးခဲ့သေးသည်။
​ဆဒမ်သည် အနောက်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံသို့သာ လည်ပတ်ဖူး၏။ပထမခရီးစဉ်မှာ စပိန်အာဏာရှင် ဖရန်စစ် ဖရန်ကို၏ ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာတွင် စပိန်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း ဒုတိယအနေဖြင့် ၁၉၇၅၌ ပြင်သစ် သမ္မတ ရှ(ခ်) ရှီးဟိုက်ခ် (Jacques Chirac)တွေ့ဆုံရန် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း သွားရောက်ခဲ့သည်။ ရှီးဟိုက်ခ်၏ ပါတီကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟု တစ်ချို့ကဆိုကြသည်။ ပြင်သစ်က ဆဒမ်ကို လက်နက်ထောက်ပံ့သောကြောင့် ဆဒမ်အုပ်စိုးစဉ်ကာလတစ်လျှောက် အီရတ်၏ အကြီးမားဆုံးသော ကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သိမ်းယူရရှိသော စာရွက်စာတမ်းများက ယခင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အပါအဝင် ရှီးဟိုက်ခ်နှင့် နီးစပ်သော ပြင်သစ်အရာရှိများ၊ စီးပွားရေးသမားများလည်း ဆဒမ်နှင့် ဆက်ဆံရောင်းဝယ်မှုများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
အီရတ်က အီရန်ကို ကျူးကျော်သည်။ တီဟီရန်မြို့လေဆိပ်၊ ရေနံကြွယ်ဝသော Khuzestanဒေသတို့ကို ၁၉၈၀ စက်တင်ဘာ ၂၂တွင် တိုက်ခိုက်ရင်း ထိုနေရာသည် အီရတ်၏ နယ်မြေသစ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ကြေငြာခဲ့သည်။ အာရပ်နိုင်ငံများ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပတို့က ထောက်ခံကြပြီး ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့အာရပ်နိုင်ငံများက ငွေကြေးအမြောက်အမြားထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဆိုဗိယက်က ကြားနေသဘောဖြင့် ထောက်ပံ့မှုမပေးချေ။ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာနယ်စည်းမျဉ်းကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ချိုးဖောက်မှုတို့ကို လျစ်လျူရှုခဲ့ကြ၏။ ယင်းအစား အီရတ်သည် စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးထောက်ပံ့မှုများကို မဟာမိတ်များထံမှရခဲ့၏။ ပထမနေ့ရက်များတွင် ဗျူဟာကျသော ဆိပ်ကမ်းများတဝိုက် မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှု အကြီးအကျယ်ရှိခဲ့သည်။ ပထမပိုင်း အကျိုးအမြတ်ရှိစေကာမူ ကြာသောအခါ အီရတ်တပ်များဆုံးရှုံးလာပြီး ၁၉၈၂၌ ခံစစ်အသွင်ဖြစ်လာရာ စစ်ကို အဆုံးသတ်ရန် နည်းလမ်းကို အီရတ်တို့ရှာဖွေခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံသည် ၂၀ရာစု၏ အရှည်ကြာဆုံးနှင့် ပျက်စီးစေဆုံးဖြစ်သည့် ယုတ်လျော့လာသော စစ်ရေးကိစ္စ၌ ညပ်မိနေခဲ့သည်။ အီရတ်က တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာပြင်တွင် ဓါတုလက်နက်များသုံးခဲ့သည်။ ကာ့ဒ်ခွဲထွက်ရေးသမားများက အီရန်ကူညီမှုဖြင့် မြောက်ဘက်စစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်သည်။ အမေရိကန်က အီရတ်ကို အီရန်တပ်ဖွဲ့များချထားရာနေရာပြသော ဂြိုဟ်တုမြေပုံများပေးသည်။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့မှ အီရန်ရေတပ်လက်ဝယ်၌ အီရတ်ရေနံတွင်းများအလူးအလဲခံရသောအခါ အခြားအာရပ်နိုင်ငံများဆီသို့ ငွေကြေးနှင့် နိုင်ငံရေးကူညီရန် လက်ဖြန့်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဆိုဗိယက်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်တို့ဆီမှ စစ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ သံတမန်ရေးစသည်တို့ကို အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့လေသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုဒေသတွင်း အီရန်တော်လှန်ရေးကျယ်ပြန့်လာမည်ကို အားလုံးကစိုးရိမ်ကြ၏။ ကုသမဂ္ဂက စစ်ပြေငြိမ်းရန်တောင်းဆိုသော်လည်း ၁၉၈၈ ဩဂုတ်လထိ ရန်လိုမှုများဆက်လက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ကာ့ဒ်မြို့ Halabjaကို ဓါတုဓာတ်ငွေ့ နှစ်မျိုးဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာ ပြည်သူ (၅,၀၀၀)သေဆုံပြီး လူတစ်သောင်းကျော်ကို ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းစေခြင်း၊ ပုံပျက်သွားစေခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းစေခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
အီရတ်-ကူဝိတ်ဆက်ဆံရေးများ လျှင်မြန်စွာပင် ပျက်စီးလာသည့်အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှ ကူဝိတ်အပေါ်ကျူးကျော်ရန်အလားအလာရှိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝိရောဓိဖြစ်ဖွယ် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆဒမ် ရရှိခဲ့သည်။ ရော်နယ်လ် ရီဂန် အစိုးရက အီရတ်အား အီရန်ကိုဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံခန့် ထုတ်ပေးထား၍ ဆဒမ်၏ အီရတ်အတွက် အမေရိကန်အကူညီအများဆုံးရသော တတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ဧပြီလ၌ အနောက်အုပ်စု၏ ဝေဖန်မှုကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အစ္စရေးက အီရတ်အပေါ်လှုပ်ရှားမှုရှိက ဓါတုလက်နက်ဖြင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတစ်ဝက်ခန့်ကို ဖျက်ဆီးမည်ဟုခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသည်။ မေလရောက်သောအခါ ယူအက်စ်၏ အစ္စရေးကို ထောက်ပံ့အားပေးမှုအားဝေဖန်ခဲ့၏။ ဇူလိုင်တွင် ကူဝိတ်နှင့် ယူအေအီးကို တပ်အင်အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ဤခြိမ်းခြာက်မှုကို တုံပြန်ရန် အမေရိကန်က လေယာဉ်များနှင့် စစ်သင်္ဘောများအား ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့သို့ စေလွှတ်၏။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဆဒမ် ဟူစိန်အား ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကို ခြိမ်းခြောက်သည့် ရန်လိုသော အာဏာရှင်အဖြစ်ဆက်လက်ရှုမြင်ခဲ့ကြ၏။ သမ္မတ ဂျော့ဘုရှ်၏ ၂၀၀၂ လွှတ်တော်မိန့်ခွန်းတွင် "ဝင်ရိုးစွန်းတန်းနိုင်ငံများအဖြစ် အီရန်၊ အီရတ်၊ မြောက်ကိုရီးယားတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အီရတ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချရန် ဆောင်ရွက်ကောင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အီရတ်အစိုးရသည် အဖျက်အင်အားကြီးသော ဓါတုလက်နက်၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်နေသည်.....၎င်းတို့၏ အမေရိကန်အပေါ်ရန်လိုမှုကို ကြွားလုံးထုတ်ကာ အကြမ်းဖက်အားပေးနေသည်"ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
National Progressive Front။ Encyclopædia Britannica။
Eur (2002)။ The Middle East and North Africa 2003။ Psychology Press။ p. 494။ ISBN 978-1-85743-132-2။
Burns၊ John F.။ "Defiant Hussein Rebukes Iraqi Court for Trying Him"၊2July 2004။2July 2004 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Saddam Hussein။ Encyclopædia Britannica။
Shewchuk၊ Blair။ "Saddam or Mr. Hussein?"၊ CBC News Online၊ February 2003။
Online NewsHour Update: Coalition Says Iraqi Regime Has Lost Control of Baghdad —9April 2003။ Pbs.org (9 April 2003)။ 1 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Banking in Iraq – A tricky operation"၊ The Economist၊ 24 June 2004။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ p. 38။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
"U.S. Relations With Anti-Saddam Groups" . Congressional Research Service. Retrieved on 15 April 2012.
"Analysis: Instability benefits Saddam Hussein"၊ BBC News၊ 16 October 2000။ 20 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
War in Iraq: NotaHumanitarian Intervention။ Human Rights Watch (25 January 2004)။ 31 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Having devoted extensive time and effort to documenting [Saddam's] atrocities, we estimate that in the last twenty-five years of Ba'ath Party rule the Iraqi government murdered or 'disappeared' some quarter ofamillion Iraqis, if not more.”
"Iraq War | 2003–2011" (in en)၊ Encyclopedia Britannica။
"Saddam Hussein executed in Iraq"၊ BBC News၊ 30 December 2006။
"WasaTyrant Prefigured by Baby Saddam?"၊ The New York Times၊ Arthur Ochs Sulzberger Jr.၊ 2004-05-15။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ pp. 13–15။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
Batatu၊ Hanna (1979)။ The Old Social Classes & The Revolutionary Movement in Iraq။ Princeton University Press။ ISBN 0-691-05241-7။
Coughlin, Con (2005)။ Saddam: His Rise and Fall။ [းHarper Perennial။ pp. 24–25။ ISBN 0-06-050543-5။
Coughlin, Con (2005)။ Saddam: His Rise and Fall။ Harper Perennial။ pp. 25–26။ ISBN 0-06-050543-5။
Coughlin, Con (2005)။ Saddam: His Rise and Fall။ Harper Perennial။ p. 26။ ISBN 0-06-050543-5။
Coughlin, Con (2005)။ Saddam: His Rise and Fall။ Harper Perennial။ p. 30။ ISBN 0-06-050543-5။
Coughlin, Con (2005)။ Saddam: His Rise and Fall။ Harper Perennial။ p. 33။ ISBN 0-06-050543-5။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ pp. 15–22။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ pp. 22–23။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ pp. 25–26။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
Tripp, Charles (2010)။ A History of Iraq။ Cambridge University Press။ p. 183။ ISBN 978-0-521-87823-4။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ pp. 26–27။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
Karsh၊ Efraim; Rautsi၊ Inari (2002)။ Saddam Hussein: A Political Biography။ Grove Press။ p. 27။ ISBN 978-0-8021-3978-8။
Jessica Moore, The Iraq War player profile: Saddam Hussein's Rise to Power, PBS Online Newshour Archived 15 November 2013 at the Wayback Machine.
"Saddam Hussein – The blundering dictator"၊ The Economist၊4January 2007။
Tripp, Charles (2002)။ A History of Iraq။ Cambridge University Press။ pp. xii, 211–214။ ISBN 978-0-521-87823-4။
Bay Fang. "When Saddam ruled the day." U.S. News & World Report. 11 July 2004. Archived 16 January 2014 at the Wayback Machine.
Edward Mortimer. "The Thief of Baghdad." New York Review of Books. 27 September 1990, citing Fuad Matar. Saddam Hussein: A Biography. Highlight. 1990. Archived 23 July 2008 at the Wayback Machine.
"No surprise in Iraqi vote"၊ The New York Times၊ 17 October 1995။ 29 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Iraq – July 22 – Saddam Plans Referendum"၊ FindArticles။ 29 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 July 2012။
"Saddam 'wins 100% of vote'"၊ BBC၊ 16 October 2002။ 29 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
[https://elpais.com/diario/2003/03/02/domingo/1046580756_850215.html El obsequio de SadamaFranco
"The Chirac Doctrine" (Fall 2005). The Middle East Quarterly.
Dickey, Christopher၊ Thomas, Evan။ "How Saddam Happened"၊ 22 September 2002။ 20 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 December 2011။
Iraqi Anfal, Human Rights Watch, 1993။ Hrw.org။ 20 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ethnic Cleansing and the Kurds။ Jafi.org.il (15 May 2005)။2December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Peter W. Galbraith။ "The true Iraq appeasers"၊ The Boston Globe၊ 31 August 2006။ 16 July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Alan Cowell။ "Iraqi Takes Harsh Line at Meeting"၊ The New York Times၊ 29 May 1990။ 20 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Bush to Gorbachev: Choose Between Saddam and the West," by Jay P. Kosminsky and Michael Johns, Heritage Foundation Executive Memorandum #280, 30 August 1990. Archived 23 September 2013 at the Wayback Machine.
"2 Mass Graves in Iraq Unearthed"၊ Los Angeles Times၊5June 2006။ 23 September 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"UN condemns Iraq on human rights"၊ BBC News၊ 19 April 2002။
Bush၊ George W. (29 January 2002)။ State of the Union (Speech)။ Washington, D.C.။ 31 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
George W. Bush။ "Full text: State of the Union address"၊ BBC News၊ 30 January 2002။ 31 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"CNN Transcript of Blix's remarks"၊ Cnn.com၊ 27 January 2003။5August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
UN news briefing။ Un.org (7 March 2003)။5August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Behind The Scenes With Saddam"၊ CBS News၊ 24 February 2003။ 31 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Smashing statues through the ages"။ 13 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 March 2010။
Joyce Battle:Saddam Hussein Talks to the FBI: Twenty Interviews and Five Conversations with "High Value Detainee # 1" in 2004။ National Security Archive (1 July 2009)။ 15 August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mariam Karouny and Ibon Villelabeitia။ "Iraq court upholds Saddam death sentence"၊ The Washington Post၊ 26 December 2006။ 12 November 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
""I WantaFiring Squad", Web"၊ Sky News၊5November 2006။7March 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 October 2007။